Uconn လက်ခံမှုနှုန်းနှင့် အလွန်လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နည်း | xScholarship
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ထားသောပါရဂူဘွဲ့ပညာသင်ဆုများ
Uconn လက်ခံမှုနှုန်းနှင့် အလွန်လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နည်း
26th မေလ 2022 by ဧလိယ ပေါလု
UConn မှာ ဘာကြောင့် လေ့လာသင့်သလဲ၊ UConn လက်ခံမှုနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။ University of Connecticut ၏ လူကြိုက်များမှုသည် ၎င်း၏ ထိပ်တန်း သုတေသန အဆောက်အအုံများနှင့် Division I တွင် အောင်မြင်မှု မှတ်တမ်းများ ကြောင့် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ အားကစားသမား။. UConn သည် ကောလိပ်တွင် အရှည်ကြာဆုံးအနိုင်ရရှိမှုနှစ်ခုလည်း ရှိသည်။ ဘတ်စကက်ဘော ကျား/မ မရွေး သမိုင်း။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ စာကြည့်တိုက်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ, ဧရာ အသုံးပြုနိုင်မှု ဗဟို။ UConn သည် လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ပြီး လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အလမ်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် ကွဲပြားပြီး တက်ကြွသော ယဉ်ကျေးမှုကို မွေးမြူသည်။
ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်သည် Public Ivy ဖြစ်သည်။ ဟိ နယူးအင်္ဂလန်ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များအသင်း UConn ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသားများသည် နောက်ဆုံးစာမေးပွဲများမတိုင်မီ နှစ်စဉ် Spring Weekend အတွက် စုဝေးကြသည်။ ၎င်းသည် 1940 ခုနှစ်များအတွင်း ကျောင်း၏ကျောင်းတော်အဖြစ် စတင်ခဲ့သော ပျော်ရွှင်စရာနေ့ပေါင်းများစွာ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်းအဝန်း ပွဲတော်။
ထို့ကြောင့်၊ Connecticut တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခြင်းသည် သင့်အား ခေတ်မီသော အသိပညာနှင့် အားကစားတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ သင် UConn ကိုတက်ဖို့စဉ်းစားနေပေမယ့်ကျောင်းအကြောင်းအများကြီးမသိပါက၊ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ UConn လက်ခံမှုနှုန်း၊ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် လက်ခံနိုင်ခြေကို မြှင့်တင်နည်းများအပါအဝင် Connecticut တက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို ဆွေးနွေးပါမည်။
သတ်မှတ်၊ ပြင်ဆင်ပြီး ဖတ်ပါ။
သင်လည်းဖတ်ချင်နိုင်သည်- အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ New England ရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံးကောလိပ် 20 ခု
University of Connecticut အကြောင်း (UConn)
University of Connecticut သည် အများသူငှာ မြေယာထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည်။ သုတေသနတက္ကသိုလ် Storrs၊ Connecticut၊ Mansfield ရှိ ရွာတစ်ရွာ။ UConn သည် 1881 ခုနှစ်တွင် Storrs Agricultural School အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား 32,000 ကျော်ဖြင့် အစိုးရ သုတေသန တက္ကသိုလ်များကြားတွင် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
UConn သည် New England's Knowledge Corridor ဟုလူသိများသော Hartford၊ Connecticut/Springfield၊ Massachusetts ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး UConn ၏တက္ကသိုလ်လက်ခံမှုနှုန်းကို သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ ထို့အပြင် UConn သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက် ၂၄ ခု၏ သုတေသနပြုမှု အထူးပြု တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် Universitas 21 သို့ ဖိတ်ကြားခံရသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဒုတိယမြောက် တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသည် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက် ဘွဲ့ကြိုပရိုဂရမ်များစွာနှင့် သုတေသနအခွင့်အလမ်းများစွာကို ပေးဆောင်ထားပြီး ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးသော ပရိုဂရမ်ပေါင်း 150 ကျော်ကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တက္ကသိုလ်တွင် ကလပ်အသင်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း 700 ကျော်ရှိပြီး၊ 40+ လူမှုရေး ညီအစ်ကိုများနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများ အပါအဝင် ကျောင်းသားများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အလားတူ၊ Connecticut ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအပေါ် ကတိကဝတ်များက UConn သည် အပြိုင်အဆိုင် ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်နေသော ကျောင်းသားများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျော်ကြားသော ပါမောက္ခအဖွဲ့ဝင်များကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံသို့ သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကျောင်း၏ ရေခဲစိမ်ကွင်း၌ စကိတ်စီးနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောအသင်းသည် ၎င်း၏ပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုသမိုင်းကြောင့် ၎င်း၏အားကစားအစီအစဉ်များတွင် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
UConn လက်ခံမှုနှုန်းဖြင့်ပင်၊ Connecticut ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအပေါ် ကတိကဝတ်များက UConn သည် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်နေသော ကျောင်းသားများကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော ဆရာ၊ ဆရာမများ။ UConn တက်ရောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကိုလည်း စစ်ဆေးပါ- နယူးယောက်စီးတီးရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး အကကျောင်း 15 ခု
1. အမျိုးမျိုးသော သုတေသနပုံစံများနှင့် ထိတွေ့မှု
University of Connecticut သည် Tier 1 သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုအချို့ရှိသည်။ ထို့အပြင် UConn တွင် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအား သုတေသနအခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးသည့် သီးခြားရုံးခန်းတစ်ခုရှိပြီး 620,000-2019 တွင် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားသုတေသနကို ပံ့ပိုးရန် $20 ထုတ်ပေးပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် UConn တွင်လေ့လာခြင်းသည် သင့်အား ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနပုံစံများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
2. သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရန် အခွင့်အလမ်း
UConn သည် တက္ကသိုလ်တွင် တက်ကြွပြီး ကျယ်ပြန့်သော အားကစားယဉ်ကျေးမှုရှိသောကြောင့် အားကစားကို နှစ်သက်ပါက လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် Division I varsity အသင်း 23 သင်းတွင် နိုင်ငံအလိုက် ချန်ပီယံ 21 ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး ဘတ်စကတ်ဘောအတွက် အထူးလူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Connecticut တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားခြင်းသည်သင့်အားအားကစားတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးသူငယ်ချင်းအသစ်များရရှိစေလိမ့်မည်။
3. လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် အခွင့်အလမ်း
UConn တွင်သင်လေ့လာသောအခါ၊ သင်သည်အခြားနိုင်ငံတကာကျောင်းသား 4,000 နီးပါး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သင်သည် လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်များ တိုးပွားလာစေရန်နှင့် သင်ယူလိုသောဆန္ဒကို မျှဝေပေးသူအားလုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
4. မြို့ကြီးများကို စူးစမ်းလေ့လာရန် အခွင့်အလမ်း
University of Connecticut သည် လှပသော နယူးအင်္ဂလန် ဒေသ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော အမေရိကန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ နယူးယောက်စီးတီးနှင့် ဘော်စတွန်ကြားတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လမ်းတစ်ဝက်ခန့်ရှိသောကြောင့် ဒေသ၏အဓိကမြို့ကြီးများနှင့် ကျေးလက်ဒေသများကို စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့် နိုင်ငံ၏အခြားဒေသများသို့ ခရီးထွက်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
UConn လက်ခံမှုနှုန်းသည် သင်၏ဝင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို မြှင့်တင်လိုပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ UConn တွင်လက်ခံမှုနှုန်းသည် 49% ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှောက်ထားသူ 100 တိုင်းအတွက် 49 ယောက်ကို ဝင်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းကို အတန်အသင့် ရွေးချယ်သည်။
သင်လည်း ကြည့်ချင်လာနိုင်ပါတယ်။ York တက္ကသိုလ်လက်ခံမှုနှုန်း
UConn ဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
UConn ၏လက်ခံမှုနှုန်းကိုသိပြီးနောက်၊ နောက်အရေးကြီးသောအရာမှာ၎င်း၏ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကို. UConn ဝင်ခွင့်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
UConn GPA လိုအပ်ချက်များ
ကျောင်းတော်တော်များများက အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ GPA လိုအပ်ချက်သို့သော် ၎င်းသည် ချက်ခြင်းပယ်ချခြင်းမရှိဘဲ လျှောက်ထားရန် သာမန်အနိမ့်ဆုံးမျှသာဖြစ်သည်။ UConn သည် သင့်အား GPA 3.0 ရှိသော အထက်တန်းကျောင်းအတန်းတွင် ပျမ်းမျှအထက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
A+ နှင့် B+ ပေါင်းစပ်မှုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ AP သို့မဟုတ် IB သင်တန်းများကဲ့သို့ ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုရှိသော အတန်းများကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင်သည် နိမ့်သော GPA အတွက် လျော်ကြေးပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သာမန်အထက်တန်းကျောင်းသူထက် သင်ပိုမိုခက်ခဲသော ပညာရေးများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း ပြသနေသည်။
သင့် GPA သည် ကျောင်းပျမ်းမျှ 3.0 တွင် သို့မဟုတ် အောက်တွင်ရှိပါက၊ သင်သည် သင်၏ SAT သို့မဟုတ် ACT ရမှတ်ကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ထက် GPA မြင့်မားသော လျှောက်ထားသူများကို ထိရောက်စွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် UConn ၏ SAT နှင့် ACT လိုအပ်ချက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။
ကိုလည်း စစ်ဆေးပါ- 10 ခုနှစ်တွင်သတ္တဗေဒအတွက်မြင့်မားသောပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များ | လစာနှုန်းများ
နောက်တစ်ကြိမ်ဖတ်ပါ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပျမ်းမျှ GPA ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
UConn SAT လိုအပ်ချက်များ
UConn တွင် ပျမ်းမျှ SAT ရမှတ်သည် 1315 တွင် 1600 ဖြစ်သည်။ ဤရမှတ်၏ရလဒ်အနေဖြင့် UConn သည် SAT ရမှတ်များအတွက် တော်ရုံတန်ရုံ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
UConn ACT လိုအပ်ချက်များ
UConn၊ SAT ကဲ့သို့ပင်၊ ခက်ခဲသော ACT ဖြတ်တောက်ခြင်းမျိုးတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသော်လည်း သင်ရမှတ်အလွန်နည်းပါက ဝင်ခွင့်ကော်မတီသည် သင့်လျှောက်လွှာကို ပယ်ချနိုင်ပါသည်။ UConn ၏ ပျမ်းမျှ ACT ရမှတ်သည် 29 ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာကို အပြီးသတ်ပြီး တင်သွင်းသည့်အခါ၊ ပြန်အအမ်းမရသော လျှောက်လွှာကြေး $75 အတွက် တရားဝင်အကြွေးဝယ်ကတ်တစ်ခု ပေးရပါမည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သင်၏လျှောက်လွှာကြေးကို လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်သည်။ UConn Graduate School မှာ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ အခကြေးငွေ စွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ.
UConn သို့ဝင်ရောက်ရန် သင့်အခွင့်အလမ်းများကို မည်သို့တိုးတက်စေမည်နည်း။
UConn သည် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် UConn လက်ခံမှုနှုန်းကို လေ့လာရန်နှင့် လေ့လာရန်နေရာကောင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပြီးနောက်၊ သင်ဝင်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်စေရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် နောက်ထပ်အရာအနည်းငယ်ရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ UConn တက္ကသိုလ်တက်ရန်အခွင့်အလမ်း။
1. ရရှိနိုင်သောစိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးအတန်းများကိုယူစဉ်တွင်မြင့်မားသော GPA ကိုရယူပါ။
အထက်တန်းကျောင်းတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်များအတွက် ကြိုးစားရုံသာမက ရနိုင်သော အခက်ခဲဆုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်လည်း စာရင်းသွင်းသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ GPA နိမ့်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းတက်နေပါက၊ သင်သည် ၎င်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အငယ်တန်း သို့မဟုတ် စီနီယာအဖြစ် သင်၏ GPA ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော စာမေးပွဲရမှတ်ကို ရယူခြင်းသည် သင်၏ Academic Index ကိုမြှင့်တင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
2. 1315 SAT နှင့် 29 ACT ကို ရည်မှန်းပါ။
လက်ခံထားသောကျောင်းသားများအတွက် အလယ်တန်း 50% အပိုင်းအခြား၏ အထက်စွန်းအတွက် ရည်ရွယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ 1315 SAT နှင့် 29 ACT ။ UConn super သည် SAT နှင့် ACT ရမှတ်များကို မှတ်သားထားသောကြောင့် သင့်ရမှတ်ကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
3. အနည်းဆုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကို ယေဘူယျအားဖြင့် ရွေးချယ်သောကောလိပ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ အမျိုးအစား လေးခုဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး Tier 1 သည် အထူးခြားဆုံးနှင့် အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး Tier4သည် အသုံးအများဆုံးနှင့် အထင်ကြီးလောက်ဆုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့အပြင်၊ သင့်လှုပ်ရှားမှုများကို စုစည်းရန် 1-2 ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော စိတ်ဝင်စားမှုများရှိရန် ကြိုးစားပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို "ဆူး" ဟုလူသိများသည်။ အနည်းဆုံး Tier 1-2 လုပ်ဆောင်ချက်အချို့နှင့် Tier 3-4 လုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်ကို ထည့်သွင်းကြည့်ပါ။
4. ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အက်ဆေးများရေးပါ။
သင့်စာစီစာကုံးများသည် ပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့် သင့်ကိုယ်သင် အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းရှိသူများနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများဖြင့် သင့်ကိုယ်သင်ဖော်ပြရန်နှင့် သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို နံပါတ်များထက်ကျော်လွန်ပြသရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
5. ဦးစားပေး နောက်ဆုံးနေ့တွင် လျှောက်ထားပါ။
UConn တွင် ဆောင်းရာသီစာရင်းသွင်းရန် လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်ဖြစ်သော်လည်း ဦးစားပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန် ကောင်းပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာကျောင်းခွဲများသည် လျှောက်လွှာများကို လှည့်ပတ်လက်ခံသည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။
ကိုလည်း စစ်ဆေးပါ- ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအာမခံ
6. ဆရာများနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ပါ။
UConn ၏ဝင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဆရာများ၏အကြံပြုချက်များသည် အရေးကြီးပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင့်အား လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သိရှိပြီး သင်၏အရည်အသွေးများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် မောင်းနှင်မှုတို့ကို မှတ်ချက်ပေးနိုင်ရန် သင့်သင်တန်းပို့ချသူများနှင့် အစောပိုင်းတွင် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ နေတတ်ဖို့ မမေ့ပါနှင့် သင့်ဆရာများကို သင့်စာရေးပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အချိန်များများပေးပါ။
7. Satellite Campuses များကို သုံးသပ်ပါ။
UConn သည် UConn လက်ခံမှုနှုန်းဖြင့် သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင်တက္ကသိုလ်တက်ရန် သတ်မှတ်ထားပါက၊ ဝင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းမည့် ဂြိုလ်တုကျောင်းဝင်းသို့ လျှောက်ထားပါ။ ထို့အပြင်၊ ကျောင်းဝင်းအားလုံးတွင် ပရိုဂရမ်အားလုံးကို မရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားထားပါ၊ ထို့ကြောင့် သင်စဉ်းစားနေသည့်တစ်ခုတွင် သင်၏ major ကိုရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
UConn စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ 1881 ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသား 32,000 ကျော်ဖြင့် အစိုးရသုတေသနတက္ကသိုလ်များကြားတွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Connecticut တက္ကသိုလ်သည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ကွဲပြားပြီး တက်ကြွသော ယဉ်ကျေးမှုကို မွေးမြူကာ တက်ကြွသော ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အလမ်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။
University of Connecticut သည် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ဘွဲ့ကြိုပရိုဂရမ်များနှင့် သုတေသန အခွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မတူညီသော ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်ပေါင်း 150 ကျော်ကို သင်ကြားပေးပါသည်။ UConn ကျောင်းသားများသည် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများအပါအဝင် ကလပ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း 700 ကျော်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ Connecticut တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခြင်းသည် သင့်အား ခရီးသွားရန်၊ လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်နှင့် အားကစားတွင် ပါဝင်ရန် ခေတ်မီသော အသိပညာနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ UConn လက်ခံမှုနှုန်းဖြင့် ကျောင်းသည် အတန်ငယ် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာသော်လည်း သင်သည် ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါက နောက်ဆက်ရှင်အတွက် ဝင်ခွင့်ကမ်းလှမ်းမည့် 49 ရာခိုင်နှုန်းတွင် သင်သည် ဖြစ်နိုင်သည်။
Uconn လက်ခံမှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမေးများသောမေးခွန်းများ
UConn သည် ကျောင်းသား 30,000 ကျော်ဖြင့် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထိပ်တန်းအများပြည်သူဆိုင်ရာ သုတေသနတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းဝင်းများကွန်ရက်တစ်လျှောက် အသိပညာရှာဖွေရေးသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြင့် စည်းလုံးနေပါသည်။
ဥရောပနှင့် အမေရိကရှိ Fully Funded Scholarship Opportunities ဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်များရယူရန် Instagram တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။
UConn လက်ခံမှုနှုန်းသည် 49 ဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ကျောင်းသည် အတန်အသင့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သင်၏ဝင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများသည် သင်၏ထူးခြားသောပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
3.5 GPA ဖြင့် Uconn သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်! UConn သည် သင့်တွင် ပျမ်းမျှထက် အနည်းဆုံး GPA 3.0 ရှိရန် လိုအပ်သည်။
kaplanpathways.com - Uconn မှာ ဘာကြောင့် လေ့လာသင့်တာလဲ။
grad.uconn.edu - UConn ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ
prepscholar.com - Uconn တွင်ဝင်ခွင့်အတွက်လိုအပ်ချက်များကားအဘယ်နည်း။
blog.collegevine.com - Connecticut တက္ကသိုလ်ကိုတက်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ။
ဖတ်ရှုရန်- လူကြီးများအတွက် အခမဲ့ အသိအမှတ်ပြု အထက်တန်းကျောင်း ဒီပလိုမာ အွန်လိုင်း
မူပိုင်ခွင့်သတိပေး! ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည်ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရပါ။ အကြောင်းအရာအားလုံးကို DMCA ကကာကွယ်ထားသည်။
ဤ site ရှိအကြောင်းအရာကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့်တင်ထားသည်။ သင်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းခံရသည်ဟုယုံကြည်ပါကမင်း [xscholarshipc (@) gmail (dot) com] သို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား တက္ကသိုလ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ post navigation
Chicago ရှိ ထိပ်တန်း 15 အကောင်းဆုံးကောလိပ်များကို ရှာဖွေပါ။
Elon တက္ကသိုလ်လက်ခံမှုနှုန်းနှင့် အလွယ်တကူဝင်ရောက်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ကြည့်ပါ။
Coding Bootcamp ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။ | ၂၀၂၂
2022 ရှိ သမိုင်းမေဂျာများအတွက် အလုပ်အကိုင်များ | စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Career Options 10 ခု
2022 တွင် လက်မှတ်များပါရှိသော စက်မှုမဟုတ်သော ဒီဇိုင်းအတွက် ထိပ်တန်း အခမဲ့ အွန်လိုင်းသင်တန်း ၁၀ ခု
နယူးယောက်ရှိ အကောင်းဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ
နယူးယောက်စီးတီးရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး အကကျောင်း 15 ခု
© 2022 xScholarship •တည်ဆောက်ထားသည် GeneratePress